၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ခရီးဖြင့် ရောက်ရှိလာသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ အရေအတွ - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံသို့ ပင်လယ်ခရီးဖြင့် ရောက်ရှိလာသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ အရေအတွ
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနှင့် မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှ စပိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်လာသူဦးရေသည် တိုးတက်များပြားလာသောကြောင့် ယခင်နှစ်ကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စပိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်လာသော ရွှေ့ပြောင်းလာသူဦးရေသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင်သုံးဆ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွင်း အာဖရိက မြောက်ပိုင်းမှ မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်၍ စပိန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ်အချိန်၌ လူပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။ ”ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ရွှေ့ပြောင်းလာသူအရေအတွက်ဟာ အလွန်များပြားလာတယ်”ဟု ဒုက္ခသည်များခိုလှုံခွင့်ရရှိရေးလုပ် ဆောင်ပေးနေသော စပိန်နိုင်ငံဒုက္ခသည်များအရေးကော်မရှင် (CEAR)က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်အတွင်း စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကမ်းခြေဒေသသို့ ပင်လယ်ခရီးဖြင့် လာရောက်သော ဒုက္ခသည်အရေအတွက် ၂၁၅ဝဝ လာရောက်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထိုအချိန်က လာရောက်သောဒုက္ခသည်အ ရေအတွက်မှာ ၆ဝ၄၆ ဦးသာရှိခဲ့၍ ယခုနှစ်တွင် လာရောက်သူဒုက္ခသည် သုံးဆခန့်မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအဖွဲ့အစည်းကဆိုသည်။
မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်း၍ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာလည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် စပိန် နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိရန် လှေဖြင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ၌ လူပေါင်း ၂၂၃ ဦး သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် သေ ဆုံးပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်ထက် ၉၅ ဦးများပြားခဲ့သည်။ ပင်လယ်ခရီးမှ ရောက်ရှိလာသူများမှာ ဂျီဘရော်လ်တာရေလက် ကြားတစ်လျှောက် ရောက်ရှိလာ ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျီဘရော်လ်တာရေ လက်ကြားသည် စပိန်နိုင်ငံနှင့် မော်ရိုကိုနိုင်ငံကို ခြားနားထားသည့် ကျဉ်းမြောင်းသော ရေလက်ကြား ပင်လယ်ဖြစ်သည်။
'ပြည်သူ့အတွက် ဗိသုကာ' ပြပွဲတွင် ပျူခေတ်မှ ၁၉ ရာစုအထိ ဗိသုကာ ပုံစံများပြသပြီး ဗိသုကာပုံစံ အချ?
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ အသုံးအများဆုံး တရားဝင် ကား-ရထားလမ်းကူး ၂၅ ခုတွင်အလို
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နျူကလီးယား လက်နက် စမ်းသပ်မှု စောင့်ကြည့်မည့် စနစ် ဗီဒီယိုကို ရုရှားက ထုတ်ပြန်
ဖိုးဦးတောင် ရှေးဟောင်းစေတီတော် ထီးတော်အလှူရှင်မှာ ဦးဇော်မင်းခိုင်သာဖြစ်ကြောင်း သတင်းစ??
သူလျှိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၃ နိုင်ငံမှ သံတမန်ဝန်ထမ်း ၅၉ ဦးကို ရုရှားနှင်ထုတ်